Golden Laser acharemekedza uye kudzivirira kwenyu voga. Isu achadzivirira chero ruzivo kuti kupa kana iwe kushanyira nzvimbo iyi.
01) Information muunganidzwa
In website iyi, unogona kufadzwa chero basa chero, akadai pakugovera kurongeka, kubatsirwa, kudhanilodha mafaira uye kupindurawo mabasa. Usati waenda kuburikidza kuti, iwe vanofanira kuzadza Info rako pachako dzatinogona kupa dzakakodzera sarudzo uye kusunungurwa mubayiro kwamuri kana ani.
Tiri causelessly upgrading basa redu uye zvigadzirwa (kusanganisira kunyoresa) kusangana zvaunoda. Kana zvichibvira, tinofanira more info pamusoro boka rako, ruzivo pamusoro zvinhu zvedu uye kuonana nzira.
All Info wako dandemutande ichi achava omarara kudzivirira. Pakazosvika info, redu Golden Laser achakwanisa basa rako nani uye nokukurumidza. Mune zvimwe zviitiko, tinogona kuudza ichangobva musika tsvakurudzo yako uye chigadzirwa info.
Tine pamutemo basa kudzivirira chero mashoko isu vatore kubva kwamuri, kusanganisira inofambiswa kana nedzimwe nzira. Ndiko kutaura kunze Golden Laser hapana chero bato rechitatu vachanakidzwa ruzivo rwenyu.
Nokuunganidza ruzivo rwako kubva padandemutande uye kusanganisa mashoko kubva pati yechitatu, tichaita reverero iwe akanakisisa zvinhu uye basa.
Cherechedza: Other tsamba Website ichi, chete kukushandira sezvo kurerukirwa uye achakutora kubva website iyi, izvo zvinoreva yedu Golden Laser haangarevi zvokufungidzira chero mutoro mabasa ako uye ruzivo pamusoro dzimwe Websites. Saka chero manotsi pamusoro Links kuti chetatu Matandira hadzizovi panguva oga ichi gwaro.
Isu akaronga kudzivirira mashoko enyu wakakwana, tichidzivisa kurasikirwa, zvisina kukodzera, kunze komutemo kushanya, buri, mhirizhonga uye kanganisa. Data All mu Server yedu kurindwa nevakuru firewall, uye password.
Tinofara kuti aongorore ruzivo rwako kana uchida. Mushure nadzurudzo, isu achakumutsirai yakarurama oudzame kuburikidza neindaneti kuti cheki yenyu.
Cookies vari zvimedu date kuti vakasikwa kana iwe vanoshanyira Website redu uye zviri mudura kudzayi Directory kombiyuta yako. Havazombofi kuparadza kana kuverenga mashoko computer yako. Cookies mumusoro password uye browse chinhu chisingafaniri chengetedzai Surfing wako dandemutande redu panguva inotevera nguva. Uyewo unogona kuramba mabhisikiti kana usingade.
06) Zivisai Modification
Dudziro aya uye Website kushandiswa iri vaiva ne Golden Laser. Kana ichi zvinhu zvemumwe kuchinja chero nzira, tichawedzera kuva yoku- shanduro papeji rino uyewo ona zuva riri footer pepeji ino. Kana zvakakodzera, tichaita kuisa makeable chiratidzo padandemutande kukuzivisai.
Chero kusawirirana anokonzerwa aya kana Website kushandiswa achateerera runoenzanirana mutemo Peoples Republic of China.